पुल दुख्छ: सम्भावित कारण, निदान र उपचार
यो जस्तै हुन्छ: मान्छे एकदम निश्चित छ कि पूर्ण स्वस्थ छ, तर अचानक नाक मा अनौठो sensations अनुभव गर्न थाल्छ। यस्तो लक्षण धेरै रोगहरु बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुल दुख्छ भने त, यो किन यो भइरहेको छ कारण बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो एक विशेषज्ञ गर्न सँगैको लक्षण र सान्दर्भिक आकलन गर्ने चिकित्सक ठेगाना छ।
पुल के हो?
एकदम मा के थियो बुझ्न नगर्ने ती, एक सानो बुझ्ने। यो निधारमा सीधा आसन्न छ जो नाक, माथिल्लो छेउको पुल भनिन्छ। यो साइट एक चिकित्सा अवधि पनि छ। ल्याटिन मा, यो nasion जस्तै सुनिन्छ। यस चिकित्सक सोध्न भने, यस्तो पुल छ, यो प्रतिक्रिया भन्ने औसत sagittal विमान संग सिउनी nosolobnogo यो पार भाग (अर्थात्। ई एक पारंपरिक बराबर भागमा मानव शरीर विभाजित कि)।
सम्भव दुखाइ हुन्छ। आघात नाक
नाक मा दुखाइ विभिन्न कारण हुन सक्छ। अक्सर दुखाइ को कारण लडाइँ, आकस्मिक शट ड्रप हुन सक्छ कारण जो को चोट छ। बच्चाहरु अक्सर खेल समयमा क्षतिग्रस्त प्राप्त। नाक चोट - छ:
घाइते नरम तन्तु भित्र अनुवादित। बाहिरको abrasions।
उपास्थि गर्न क्षति। यो बायाँ र दायाँ नाक पदहरू मा नाक अलग septum घाइते हुँदा प्रायजसो।
विभिन्न जटिलता को भंग।
एक व्यक्ति एक झटका वा गिरावट पछि उहाँले दुखेको नाक छ कि महसुस भने, त्यसपछि उहाँले तुरुन्तै ENT डाक्टर वा सर्जन देखा पर्छ।
धेरै अवस्थामा, नाक मा दुखाइ छ neuralgia एक लक्षण। यसलाई उदाहरणका लागि, एक सिंड्रोम बारेमा प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीमा चिली डाक्टर charlene वर्णन छ। थप व्यापक नाम सिंड्रोम charlene - nosoresnichnogo neuralgia स्नायु। जब मानिसहरूले दुखेको नाक पुल र निधारमा यो सिंड्रोम। कहिलेकाहीं दुखाइ आँखा क्षेत्रमा विस्तार। यस मामला मा, कोर्नियल शक्ति समस्या हुन सक्छ, र उपचार, मात्र एउटा नसा विशेषज्ञ, तर पनि एउटा नेत्र रोग विशेषज्ञ आवश्यक छ।
Neuralgia तीव्र दुखाइ सँगसँगै। र arching अनुभूति थिचेर उत्पन्न। अक्सर, दुखाइ आक्रमण रात मा आउनुहोस्। गरिब निद्रामा र निद्रामा शिथिल विरामी। Nosoresnichnogo स्नायु रोग "ट्रिगर" बिन्दु छ। रोगी एक अलिकति दुखेको नाक छ भने, तपाईँले थिच्नुहोस् "ट्रिगर" दुखाइ को बिन्दु थप तीव्र हुन्छ।
Neuralgia थप लक्षण बिना उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर आक्रमण समयमा गंभीर अवस्थामा मा निधारमा धडकता, रूघाँ सुरु, नाक मा श्लेम लाग्एको को सुनिंनु, को eyeballs र lacrimation राता। को frontal क्षेत्रमा पल्सेशन शान्त दुखाइ को क्षण मा महसुस हुन सक्छ। अक्सर आक्रमण निर्भर गर्दैन।
neuralgia ताकत nosoresnichnogo को कारण
neuralgia सबैभन्दा बारम्बार कारण, पुल पीडा छ थिचिएको गर्दा - तीव्र श्वसन जटिलताहरू। यसबाहेक, समयमा चिसो लक्षण को नाक मा विशेषता दुखाइ छैन।
अर्को कारण - एक दन्त समस्या। सुनिंनु को क्षेत्र मा ऊतक को innervation शाखा nosoresnichnogo ताकत संग दन्त समस्या सम्बद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। दन्त दुखाइ एक व्यक्ति अनुभव गर्न सक्दैन, तर कारण दाँत ताकत गर्न सुनिंनु neuralgia सुरु, र पुल र टाउको दुखाइ को एक परिणाम रूपमा।
यो पनि ENT रोगहरु बन्न nosoresnichnym स्नायु सम्बन्धित neuralgia एक बारम्बार कारण छ। समस्या जटिलता को डिग्री बदलिने को हुन सक्छ। तर गरेको अर्को खण्डमा थप विवरण यस बारेमा कुरा गरौं।
ENT रोगहरु: rhinitis
विरामीहरु अक्सर यो एक चिसो समयमा पुल दुख्छ कि गुनासो। विरामीहरु, आफ्नो भोक हराउनु धेरै असहज महसुस गर्छन्। नाक बाट पानी बग्नु सामान्य श्वास संग interferes। हृदय र भास्कुलर सिस्टम विघटन गर्न सक्ने oxygenation Worsens। मुख ग्रस्त गर्न सक्छन् र अन्य श्वसन अंगहरु मार्फत inhaled हावा को कारण। Rhinitis intracranial र intraocular दबाव मा उतार चढाव सक्छ। त्यसैले यो एक rhinitis र रूघाँ आफूलाई बेला नाक मा दुखाइ बेवास्ता गर्न असम्भव छ।
Sinusitis र यसको प्रजाति
नाक शरीर रचनाको विज्ञान एकदम जटिल छ। धेरै विरामीहरु कारण नाक मेरुदण्ड मा सुनिंनु पुल दुख्छ। frontal, ethmoidal labyrinth, वी, maxillary (maxillary): यो धेरै sinuses छ। को नाक sinuses को श्लेम लाग्एको झिल्ली को भडकाऊ प्रक्रिया को साधारण नाम - sinusitis। Sinusitis - sinusitis एक प्रकार।
सुनिंनु मात्र होइन maxillary साइनस, तर frontal असर गर्न सक्छ। यस्तो sinusitis डाक्टर sinusitis रूपमा वर्गीकृत। यस मामला मा, नाक को पुल र दुखेको टाउको, को ब्रो क्षेत्रमा यी sensations बेचैनी थपियो। समय दुखाइ को सबै भन्दा नीरस छ, तर झुकन वा थिच्दा यो जोडले बढ्छ।
यो labyrinth को जाली मा श्लेम लाग्एको कक्षहरू inflamed भने, जब नाक मा दबाव पनि बेचैनी अनुभव हुन सक्छ। यो उप sinusitis etmoidita भनिन्छ। रोग अक्सर उत्पन्न छैन, तर यो उपचार गर्न गाह्रो छ र अक्सर sinusitis र sinusitis सँगसँगै छ।
कि rhinitis विशेष ध्यान आवश्यक छैन धेरै विश्वास: "बस, विचार एक चिसो, आफूलाई आयोजित ..." तर यो एउटा विशाल गल्ती हो। sinusitis - समाप्त उपचार चिसो अझ जटिल रोग को शुरुवात हुन सक्छ। को sinuses को सुनिंनु केवल एक stuffy नाक, तर पनि समग्र कमजोरी, थकान र टाउको दुखाइ छ। यो नाक7दिन भन्दा माथि भरी छ भने, तपाईंले श्रव्य विज्ञ परामर्श र जहाँ स्पष्ट गर्नुपर्छ भनेर थाह महत्त्वपूर्ण छ sinuses को एक्स-रेज। एक्स-रे बिना डाक्टर यो रोग निदान गर्न गाह्रो छ।
gangliitis - यो रोग दोस्रो नाम छ। समस्या किनभने हार pterygopalatine नोड को उत्पन्न हुन्छ। यो नाडीग्रन्थि, को IE नाडीग्रन्थि, कक्षहरू बनेको छ जो। रोग पहिलो पटक वर्णन र आफ्नो सम्मान Sladera सिंड्रोम मा एक अमेरिकी विशेषज्ञ नाम छ। Pterygopalatine नोड अनुहार र trigeminal स्नायु, साथै कान र ciliary नाडीग्रन्थि संग सम्बन्धित छ। त्यसैले, प्रक्रिया अक्सर भन्दा धेरै नोड्स फैलाउन छ। Gangliitis, गराउँछ सुनिंनु विचार कम गर्छ। को यो अक्सर नाक, आँखा सकेट र माथिल्लो चिबुक दुख्छ किनभने। गंभीर अवस्थामा मा, अस्थायी क्षेत्र र हात गर्न फैलाउने दुखाइ। दुखाइ एक पक्ष गर्न अनुवादित छ।
कारण pterygopalatine ganglionitis (ganglionevrita)
सामान्य घटना असामान्यताहरु ENT, दन्त समस्या, पुरानो intoxications ट्यूमर देखि उत्पन्न - नाक मा दुखाइ wherein Ganglionitis। हामी पनि maxillofacial आघात हाइलाइट गर्नुपर्छ।
जहाँ नाक मा दुखाइ को मामला मा जाने?
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, नाक मा दुखाइ को कारण सेट गर्न सकिन्छ। बेचैनी एक चिसो द्वारा preceded आउँछ भने, तपाईंले तुरुन्तै Otolaryngologist लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षा र यसको परिणाम चिकित्सा चिकित्सा, लुगा धुने, खस्छ वा नाक स्प्रे नियुक्त गर्नेछ। परीक्षा समयमा, निर्धारित एक रक्त परीक्षण र एक्स-रेज पारित। जहाँ sinuses को एक्स-रेज, उपचार को स्थान निर्दिष्ट गर्नुहोस्। sinusitis को उपचार मा प्वाल पार्ने काम को सबै भन्दा राम्रो विधि मानिन्छ। तर डाक्टर को यो हेरफेर को विफलता अर्को समाधान खोज्दै छ। Rhinitis, sinusitis, sinusitis र sinusitis अन्य प्रकार पुरानो फारम मा रोगहरु को स्थानान्तरण रोक्न र गम्भीर जटिलताहरू पैदा गर्न ढिलाइ बिना उपचार गर्नुपर्छ।
पुल नाक चोट को फलस्वरूप चोट छ भने, यो एक आघात सर्जन संकेत गर्न आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प maxillofacial सर्जरी को क्लिनिक गर्न अपील हुनेछ। यी केन्द्रहरू विशेषज्ञहरु सर्वश्रेष्ठ तपाईं एक कस्मेटिक समस्या मात्र होइन समाधान गर्न आवश्यक छ किनभने यहाँ, को नाक हड्डी को भंग पोख्त छ, तर पनि नाक पदहरू को diameters र नाक septum अवस्था रिकभरी नियन्त्रण गर्न। एक चोट पछि नाक मा दुखाइ, खोजी गर्दा चिकित्सा सल्लाह पछि छैन 10 दिन भन्दा हुनुपर्छ। यो समय समयमा सुनिंनु subsides, र तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ - सञ्चालन गर्न - यदि आवश्यक।
यदि कुनै चोट लागेको थियो, र नाक मा दुखाइ rhinitis वा तीव्र श्वसन रोग द्वारा preceded थिएन, तपाईं एक नसा विशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ। यो विशेषज्ञ Sladera charlene सिंड्रोम वा सिंड्रोम पहिचान गर्न सकिन्छ।
दुखेको नाक भने, डाक्टर अतिरिक्त दन्त परामर्श लागि विरामीहरु उल्लेख गर्न सक्छन्। पहिले नै दाँत सम्बन्धित, केही भडकाऊ प्रक्रिया उल्लेख, पीडा, तर अन्य प्रणाली र अंगहरु मा प्रभाव कारण छैन।
कुनै पनि अवस्थामा, पुल भन्दा बढी तीन दिनको लागि बिरामी छ भने, तपाईंले सहायता खोजी गर्नुपर्छ। एक डाक्टर मात्र आफ्नो हालत खुलारूपमा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। लक्षण, तपाईं ध्यान छैन तिर्न गर्नुभयो जो, गम्भीर विकृति विकास संकेत हुन सक्छ।
हृदय arrhythmia - यो विकृति के हो?
Syphilitic roseola: फोटो, लक्षण, वर्णन, किसिम, स्थानीयकरण, अंतर निदान, उपचार
छाला को Neoplasm
तपाईं यस मामला मा के कम रक्तचाप छ भने,
किन खुट्टा मा हड्डी बढ्दै?
गठिया कसरी उपचार गर्न: डाक्टर को अनुभव
एक धेरै उपयोगी नुस्खा: तरकारी र प्राच्य संग धमाकेदार माछा
गाडीको अगाडीको शिशा wiper काम गर्दैन: सम्भव कारण र समस्या समाधान
आर्टुर स्मोलोनिनोभ: जीवनी, चलचित्र चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
किन भ्रमित कपाल? आफ्नो बाल कसरी comb गर्न? Comb कपाल स्टाइल
केल बन्दागोभी स्वास्थ्य लाभ
लोकप्रिय टेलिभिजन फिलिम 60 auctioned को "जगुआर"
तातो प्रमुख, "को काकेशस को तलहटी" - सहारा: वर्णन, मिनेट समीक्षा
तपाईंको कम्प्यूटर स्थापना: आफ्नो माइक्रोफोन कसरी स्थापित गर्न
Hydrangea को विवाह फूलगुच्छा - कसरी राम्रो!
भरिएको र पतली पेनकेक्स: एक अचम्मको डिशको लागि एक नुस्खा
शिक्षा केंद्रीकृत रूसी राज्य: पूर्वापेक्षा, सुविधाहरू, कोसेढुङ्गामा
एलिसन Lohman: चलचित्र, परिवार फोटो